အိပ်ရာမြက်: နိုင်ငံအတွင်းမှာထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်မှုများ (ပေါင်းသတ်ဆေး, ရိုးရာကုစား) - အသီးအနှံ - 2020
အိပ်ရာမြက်: အဧရိယာအတွင်းရှိ pernicious ပေါင်းပင်ဖယ်ရှားပစ်ရရန်မည်သို့
ဥယျာဉ်တော်၌ပေါင်းပင် - လူအတော်များများလယ်သမားတစ်ဦးခေါင်းကိုက်: ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အာဟာရယဉ်ကျေးမှုမထိုက်မတန်သီး, ဒါကြောင့်အချို့သောမျိုးစိတ်ပိုဖယ်ရှားပစ်ရကျနော်တို့လိုချင်ပါတယ်သကဲ့သို့လွယ်ကူသည်မဟုတ်စုပ်ယူ, မြေဆီလွှာပျက်ဆီးကြဘူးမသာ။ ဒီနေ့အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ် တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်မျိုး pyree, ယင်း၏ဖော်ပြချက်များနှင့်စက်ရုံ-ကြူးကျြောသူ၏စွန့်ပစ်ခြင်း၏နည်းလမ်းနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာ။
ဘယ်လိုဗလာတစ်ပေါင်းပင်အိပ်ရာမြက်ပင်ကဲ့သို့ပထမတစ်ချက်ကြည့်မှာအထင်အမြင်မှားစေမဖွစျရမယျ။ ဤသည် 20 စင်တီမီတာအကြောင်းကိုတောက်ပအစိမ်းရောင်နိုင်စွမ်းအမြစ်အနက်အကျယ်3မီတာအထိယူပြီး။
ဒါဟာနှစ်စဉ်ရိုးရာကျေးလက်တေးဂီတ၏ဖယ်ရှားပစ်ရပုံကိုလေ့လာသင်ယူဖို့လည်းရိုင်း oat, horsetail, နေကြာ broomrape, ဆူး, ဘုစပတ်သစ်သား-bindweed, milkweed, dandelion, လယ်ပြင်မျိုးစေ့ကိုကြဲဆူးပင်, dodder, goosefoot, purslane အသုံးဝင်သည်။
ဒါဟာအားလုံးလမ်းညွန်အတွက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံမယ့်အားကောင်းတဲ့အလွှာတပ်ဆင်ထားကာကျယ်ပြန့်အမြစ်စနစ်ဖြင့်နှစ်ရှည်တစ် herbaceous, စီရီရယ်, ဖြစ်ပါတယ်။ ၏အမြင့် 1.5 မီတာအထိရှိနိုင်ပါသည်အဓိကအားထား။ လာမယ့်ရှည်လျားကျဉ်းမြောင်းသောအရွက်တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သောအစိမ်းရောင်အရောင်တည်ရှိသောအညှာ။
အဆိုပါပန်းပွင့်ဆူးစဉ်အတွင်းသေးသေးလေးပန်းပွင့်အရှည် 30 စင်တီမီတာ, နားဖွင့်, ကြီးမားတဲ့အတွက်စုဆောင်းနေကြသည်။ တစ်ဆူးအားဖြင့်သားကိုမွေးရန်ကူညီပေးနေ, ကောက်နှင့်ငှက်ပျံ့နှံ့ဖို့ပျော်ရွှင်နေသောမျိုးစေ့များ, ကြဲဖြန့်ပြီးနောက်ဇူလိုင်လ, - ကာလအတွင်းဇွန်လပန်းပွင့်။
ဂျုံမြက်မျိုးစေ့များနှင့်အမြစ်များဌာနခွဲအားဖြင့်ရရှိစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏မျိုးစေ့များကိုပင်အပူ2ဒီဂရီမှာအညှောက်ပေါက်, နှင့်လုလင်အညွန့်မိုးခေါင်ရေရှားမှုသို့မဟုတ်နှင်းခဲကိုကြောက်နေကြသည်မဟုတ် - ဒါဟာအလွန် Hardy စက်ရုံဖြစ်သည်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါထိုလူမျိုးကိုထိုကဲ့သို့သောအမည်များအဖြစ်အကြားခဲ့: "Zhitets", "Ponyri", "တီကောင်မြက်" ။
•အမျိုးပွားမည်သည့်အခွအေနလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အပင်များ၏စွမ်းရည်အပေါ်လည်းအံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ရာမြက်ကခက်ခဲယျတျောနှငျ့အတူစစ်တိုက်ခြင်းငှါအောင်, အကျဉ်းမြောင်းသွယ်လျ၏မည်သည့်အပိုင်းအစကနေပေါက်လေ့ရှိပြီးမေးခွန်းအဖြေများကိုအဘို့အရှာဖွေရေးစေသည်ဖြစ်နိုင်သည်: ပေါင်းပင်ဖယ်ရှားပစ်ရရန်မည်သို့, အဖန်ဖန်။
သင်သိသလား? တချို့နိုင်ငံတွေမှာတရားဝင်ဆေးပညာ pyreyu ဖို့ lukewarm သဘောထားကိုနေသော်လည်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုက၎င်း၏ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများကိုအသိအမှတ်မပြု။ ဥပမာအားဖြင့်, ဆွစ်ဇာလန်နှင့်ဂျာမနီ၌, စက်ရုံတာဝန်ရှိသူတဦးက pharmacopoeia အတွက် applications များ၏ကျယ်ပြန့ရှိပါတယ်။
ထိုဒေသတွင်၎င်း၏ဖြစ်ပျက်မှုတားဆီးနိုင်ရန်အတွက်, သင်ယဉ်ကျေးမှုကိုသုံးနိုင်သည်ဒီတော့ဂျုံမြက်ကိုသူမခံမရပ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်သူကိုအတူရပ်ကွက်အတွင်းသည်, စိုက်ပျိုးပွညျ၌ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရနိုင်ပါတယ်။ ပဲစေ့တွေဟာနှင့်ပဲမျိုးစုံသို့မဟုတ်ပြောင်းဖူးနှင့်နေကြာ - ထိုဧရိယာ၏အစွန်းတွင်ပဲစိုက်ပျိုးနိုင်။ ထိုအပင်, မကောင်းတဲ့ရပ်ကွက်အပြင်, ကြီးထွားမှုအဖြစ်အရိပ်ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်, ငါတို့ပေါင်းပင်ကောင်းသောအလင်းရောင်ချစ်တော်မူ၏။
သင်သိသလား? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင်အစားအစာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တစ်ပေါင်းပင်အသုံးပြုတဲ့မိုးသည်းထန်စွာပိန်နှစ်ပေါင်း။ အိပ်ရာမြက်ကြိတ်မုန့်ညက်, မုန့်ဖုတ်သောမုန့်, ​​ကိတ်မုန့်များ၏အစာသိုလှောင်မြစ်ထဲကနေ။ ယခုအသုံးပြုရန်: လတ်ဆတ်သောအမြစ်များဟင်းချို, သုပ်နှင့်ဘေးထွက်ဟင်းလျာများအတွက်သွားရ, အခြောက်နှင့်အလှော်အမြစ်များ မှစ. ကော်ဖီပုံနဲ့တူတဲ့သောက်ဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ် အဆိုပါဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးနေသေးသောဧရိယာ၌, သင် mulch ကိုသုံးနိုင်သည်။ တစ်နှစ်အဘို့, အထူ 35 စင်တီမီတာမြက်ပင်ကုတင်ရဲ့မျက်နှာပြင်အလွှာပေါ်တွင်လဲလျောင်း။ ဤနည်းလမ်းအိပ်ရာမဖျက်ဆီးပါဘူး, ဒါပေမယ့်အလငျးဖို့လမ်းအောင်, အပင်များ၏အမြစ်များကိုထိုအခါမှာညပ်မိသည်မြေဆီလွှာအလွှာထားခဲ့ပါ။ ဒါဟာသင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူပေါင်းပင် povydorgivat ခွင့်ပြုပါတယ်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ပေါင်းပင် tenacious, ဒါကြောင့်မဟုတ်ရင်ကြောင့်သီးနှံပင်များရေနစ်သေကုန်ပြီနဲ့ဟန့်တား, အများဆုံး inopportune ယခုအချိန်တွင်အတွက်ပေါက်မည်, အစဉ်အမြဲဧရိယာ၌အိပ်ရာမြက်ဖယ်ရှားပစ်ရရန်အရေးကြီးပါသည်။
အားလုံးအမြစ်ပေါက်အပင်ပေါ်မှာဆုံးဖြတ်လိုက်တူး site ကို - လူကြိုက်အများဆုံးနည်းလမ်းများတစ်ခုမှာ။ ဂေါ်ပြားနဲ့ကောက်ဆွနှင့်အတူတူးမနေပါနဲ့: ဒီတော့ပိုပြီး pererublennye ဂေါ်ပြားဓါးအမြစ်များစွန့်ခွာဖို့မအခွင့်အလမ်း, စက်ရုံအမြစ်များအားဖြင့်ပြောက်အပြင်, မြေယာဖွဲ့စည်းခြင်း, ခက်ဂေါ်ပြားတူးလည်းမရှိ။ , စျေးကြီးနှင့်အချိန်မှလမ်းကိုလူတိုင်းသင်တစ်ဦးကြီးမားသော site ကိုရှိပါကတစ်ခု inverted အလွှာများနှင့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများဖြတ်သန်းသွားရပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းမူကား,
ဒုတိယနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်: 20 စင်တီမီတာအနက်ဖို့မော်တာ-ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဧရိယာအဘို့အသွား, အဲဒီနောက်စက်ရုံအစိမ်းရောင်ချေးထား: buckwheat, lupine, မုဒိမ်းမှု။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကြူးကျြောသူအတွက်ပေါင်းပင်ထွက်ရေနစ်သေကုန်ပြီ, အစိမ်းချေးလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်အောက်ဆီဂျင်နှင့်အာဟာရများနှင့်အတူက saturating, site ပေါ်တွင်မြေဆီလွှာ၏အရည်အသွေးကတိုးတက်ကောင်းမွန်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်ကောင်းသောနည်းလမ်း။ Mown ဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ်မြေဆီလွှာတွင်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံမြက်ယဉ်ကျေးမှု။
အရေးကြီး! ပေါင်းသတ်ဆေးစဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ရပ်များသာဒေသခံဒေသများရှိကောင်းသောနေသောခေါင်းစဉ်: ကုတင်ပတ်ပတ်လည်ဥယျာဉ်တော်၌အပုဒ်။ အထူးသပေါင်းပင်များကိုဖျက်ဆီးမဟုတ်ဘဲဖိနှိပ်ယဉ်ကျေးမှုရည်ရွယ်စနစ်တကျဆေးဝါး အသုံးပြု. ယဉ်ကျေးမှုစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်အတူဒေသများအတွက်စစ်တိုက်ခြင်းငှါ။
"ဟာရီကိန်း Fort 500 SL" ။
အရေးကြီး! ဒါဟာအပေါ်ယံမြေဆီလွှာတွင်နေထိုင်အကျိုးရှိသောသေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိဖို့အန္တရာယ်ဖြစ်စေခြင်းငှါမသကဲ့သို့, ပိုပြီးတစ်ကြိမ်သုံးနှစ်ကထက်ဆိုက်မှာပေါင်းသတ်ဆေးသုံးစွဲဖို့မလိုလားအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးရှင်းသောရိုးရာကုစား၏အကူအညီနှင့်အတူဥယျာဉ်တော်၌ wheatgrass ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားပါ။
ထိုဥယျာဉ်ကိုလမ်းကြောင်းထဲမှာပေါင်းပင်ထိန်းချုပ်ဖို့ ဆိုဒါဖြေရှင်းချက်ကိုအသုံးပြုသို့မဟုတ်ဆားတို့ကိုနိုင်ပါသည်။ ရေဖြင့်မြေပြင်သို့စိမ်ဤ tools များအမြစ်စနစ်ဖြင့်ဂျုံမြက်ငါဖျက်ဆီးမည်။
နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင်ဒါခေါ်ကြမ်းအစေ့စီရီရယ်၏စွန့်ပစ်အပြောင်းအလဲနဲ့တစ်လူကြိုက်များနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံပင်များကောင်းစွာထူထောင်ကြသောအခါ, စောင့်ဆိုင်းဖို့လိုအပ်သောဖြစ်ပြီး, သူတို့ကိုလှည့်ပတ်ဂရုတစိုက်ဒီစပါးကိုဖြန်း။ ဆွေးမြေ့, biomaterial ပေါင်းပင်၏ကြီးထွား depressing, gluten သတ်မှတ်။
နောက်ထပ်နည်းလမ်း - အဆိုပါပိုးမွှားတောအုပ်အပေါ်တိုက်ရိုက်ကုတင်စီစဉ်ပါ။ သိပ်သည်းကတ်ထူပြားပြည့်နှက်နေလေသည်ဒီရှုတ်ထွေးဘို့ကား, မြေအထက်, အပျက်အစီးများ, အကိုင်းအခက်အရွက်နှင့်ပြည့်စုံသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကုတင်အောက်မှာရှင်သန်မဟုတ်ပေါင်းပင်များနှင့်ဆိုက်ကနေပျောက်ကွယ်သွား။
တတ်နိုင်သမျှစပါးရိတ်ရာကာလပြီးနောက်အိပ်ရာကိုဖွိုဖကျြကမိုက်။ ကုတင်ပင်အုတ်သို့မဟုတ်မိုးသည်းထန်စွာတစ်ခုခုနှင့်အတူတော်တော်များများသောနေရာများ၌နှိပ်သိပ်သည်းအနက်ရောင်သတ္တုပါးနှင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။ စက်ရုံမီးမရှိရင်ကြီးထွားလာရပ်နှင့်ကွယ်လွန်စောစောဆောင်းဦးရာသီအတွက် site ကိုအခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ 80s ၏အဆုံးဂျပန်သိပ္ပံပညာရှင်မှာ သူကဒါခေါ် EM-ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများတီထွင် သောမြေဆီလွှာကိုထိခိုက်စေပေမယ့်ဆန့်ကျင်ပေါ်, ပေါင်းပင်၏မြေယာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့နိုင်ပါတယ်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းကလေးမွေးဖွား၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အရည်အသွေးတိုးတက်လာဖို့သူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုအကျိုးရှိသောသေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိထဲမှာမဆံ့ဘူး။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်ဆေးဝါးဓာတ်မြေသြဇာအတွက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ကွယ်ပျောက်သွားမြေများပြန်လည်, ဒါပေမဲ့သူတို့မကြာခဏကျူးကျော်ပင်များ၏ဖယ်ရှားရေးအတွက်အသုံးပြုနေကြပါတယ်။
gazonovaya Displacement မြက်ပေါင်းပင်လျှင်အကူအညီကိုရှာရန်
ကုတင်၏ကျဆုံးခြင်းအတွက်အမြစ်များသည်မြေ၌ဆက်လက်တည်ရှိသည့်ပေါင်းပင်၏အစိမ်းရောင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြတ်, တစ်ပေါက်ပြားဖြစ်ကြ၏။ ကြောင့်တက်ကြွပိုးမွှားမြက်၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှ EM-မူးယစ်ဆေးနဲ့ကုသကုတင်, ရုတ်တရက်ကြီးထွားသို့သွားပါ။ ပထမဦးဆုံးနှင်းခဲအောက်မှာလာမယ့်အပင်သေဆုံးပါလိမ့်မယ်။ ပေါင်းပင်တွေနဲ့အတော်ကြာကုသသင်၏မြေချန်ထားမည်ပြီးနောက်။ အောက်ပါမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ပျော်မွေ့ယနေ့တွင်အောင်မြင်မှု:
အန္တရာယ်ရှိသောအပင်ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲထဲမှာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတအလေ့အထများမှ preference ကိုပေးစေခြင်းငှါအစဉ်အမြဲ သာ. ကောင်း၏။ ထို့ကြောင့်မြေကြီးနှင့်မရမိမိတို့အမြေသြဇာကောင်းသောဝိသေသလက္ခဏာများဆုံးရှုံးများနှင့်စပါးရိတ်ရာကာလလူ့ခန္ဓာကိုယ်များအတွက်အနုတ်လက္ခဏာ element တွေကိုစုပ်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Azalea အရွက်ကို drop: စက်ရုံဆက်ဆံဖို့ဘယ်လောက်၏အဓိကအကြောင်းရင်းများ
တောင်များနှင့်အတူစကော့တလန်သီးနှံ - ဖော်ပြချက်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများအာလူးအမျိုးမျိုး "သခင်နေရာများ"
အသုံးဝင်သောစားပွဲပေါ်မှာအလှဆင်: ခရမ်းချဉ်သီး '' Cream သကြား "ကတ္တီပါနီ, အဝါရောင်နှင့်အနီရောင်
စိမ်းလန်းစိုပြေလှပသော pelargonium တယ်ရီ - မျိုးပေါင်းဖော်ပြချက်များနှင့်ဓါတ်ပုံ, အထူးသဖြင့်မွေးမြူရေးနှင့်စောင့်ရှောက်မှု
ပြည်တွင်းကြီးမားသော-fruited ခရမ်းချဉ်သီးအမျိုးမျိုး "လိမ္မော်ရောင်ကုမ္ပဏီကြီး"
မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့စျေးသက်သာသောသို့မဟုတ် begonia အရွက်၏မျိုးပွား။ အကြံပြုချက်များ, အင်္ဂါရပ်တွေနှင့်ညွှန်ကြားချက်
ခြားနားချက် hibiscus နှင့် hibiscus ကဘာလဲ? မျိုးပေါင်းဖော်ပြချက်, စိုက်ပျိုးနှင့်စောင့်ရှောက်မှု၏စည်းမျဉ်းများ